Ndiani anoita Prime Minister? Masimba Prime Minister
Issues upfumi kusimudzira nyika hanya vazhinji vemo. Munguva yokutambudzika, mamiriro ezvinhu vanhuwo kwava kuipa, vanovamanikidza kutarisa enyika Olympus, uye kumbira ndiani anokonzera mamiriro ezvinhu aya. Uye pano anotanga kuvhiringidzika. Vamwe pfungwa purezidhendi, vamwe vanoti hurumende iri mubasa upfumi. Ndiani zvakarurama? Kuti tinzwisise, ngationei ndiani anoita Prime Minister. Chero zvazvingava, ndicho yepamutemo kuita zvisarudzo zvine chokuita noupenyu hwedu.
Kudzidza vhidhiyo garo
Kana totaura kuparadzira kwemasimba pakati okutanga vanhu ehurumende, rinofanira kubva pamurairo inokosha. Izvi zvinoshanda democracies zvose, Russia hapana anosara. About uyo anoita Prime Minister, makanyorwa zvizere munyaya 111 reMitemo. Chikamu chino mutemo inokosha ine mana zvinhu, izvo takadzidza muudzame, uchishandisa mazano ruzivo magweta. Bustler vanoti kamwechete kuti sachigaro Hurumende aizogadza President ane mvumo cheHurumende Duma. Hazvina mazwi anenge azere akati nyaya reMitemo. Rine "danho nedanho mirayiridzo" zviito ehurumende masangano munyaya kudzidza kwacho. Chokwadi chokuti chete peziso nezvokutambudzika ndiani anoita Prime Minister uye nyore. Kutaura zvazviri, mune nyaya iyi zvakawanda nuances zvinofanira kujekeswa kuti nhubu. Musoro hurumende ine utongi hwegutsaruzhinji ezvinhu ane nhamba kwemasimba, pamusoro Implementation iyo kunoenderana kubudirira kwakaita tabvumirana munzanga. Asi mubvunzo uyu hakusi aripo review, tikaongorora mutemo.
Ndiani anoita Prime Minister
Panyaya rakasanangurwa pakati Prime Minister of danho ndohwaJehovha President. The Constitution ushandiswe nguva, apo chiso nyika yokutanga vanosungirwa kuzivisa kwake chaiko. Kufunga purezidhendi Russian kunopiwa chaizvo vhiki mbiri. Sezvo iye vanosungirwa kuti candidacy wake Duma panguva ino. Pane nyaya mbiri kana kuchinja musoro wehurumende. Ivo ndeinotevera:
Kutangwa purezidhendi mutsva Russian Federation.
The yokurega of wehurumende yekare.
Muchiitiko chokutanga, kuti muvhiki mbiri riri kuverengwa kubva musi Pakutsaurirwa. Kunyange zvazvo mune tsika, munhu ndiye unokurwirai kodzero kutungamirira Russia kwave huru vaida pambiru. Kana yechipiri, masvondo maviri yokufungidzira kuverengwa kubva musi pamudyandigere anemasimba mukuru wekare.
mabasa State Duma
Ngatiendei kuitira kuti nzira, kuti arege kutadza chete nuance. Apo mutungamiri wenyika akaita pfungwa yake, State Duma, anotungamirirwa art. 137 pakati Rules, vanofanira kuronga kunzwa. The musarudzo zvatichapa kuti ape reParamende chirongwa chacho. Ndizvo vamiririri vedu kusarudzwa achateerera murume uyu vachaonga maonero ake pamusoro tarisiro kukura ehurumende, muchakumbira mibvunzo, uye zvakafanana. Izvi "kubvunzurudzwa" ari Duma anopiwa vhiki. Dzimwe nhengo dzeParamende achatora chisarudzo chete pashure kuva nemaonero dzakajeka aikwikwidza rimwe chemhando mbiru. Muna State Duma maviri chete kuita kuti anobvumirana President of Russian Federation kana kuramba. Muchiitiko chokutanga, munhu aikwikwidza anogadzwa nokuda chirevo President, wechipiri zvinoda kushanda inotevera ndima of Art. 111 reMitemo. Anotsanangura kuti sei purezidhendi kuti asaende. Iye anopiwa vhiki zvekuti zvinotevera nominations. Her kunzwa ndokubvunzurudza zvakare uye zvakafanana, kusvikira chisarudzo. Total President Russian anogona zvamaronga kuti tendero kuHurumende Duma nhatu musarudzo.
On basa vevatariri
Kusarudzwa machinda, Chokwadi, kuva zvakanaka yakafara masimba, kusanganisira kudzidza nyaya. Ekufambisa candidacy Executive mukuru, ivo vamwe basa kune vanhu kuti basa rake purezidhendi weRussia. Zvisinei, mubvunzo iri kuresa pavo ngozi. Chokwadi chokuti kuramba katatu kuti RF President kuti zvakataurwa inoguma pokufa State Duma. Maererano ya. 4 chete nyaya mutemo inokosha, purezidhendi vanosungirwa kuzivisa kugadzwa imwe sarudzo itsva kana vevatariri vasingagoni kugadzirisa nyaya Prime Minister. Ndiko, vevatariri zvisiri nyore, uye vanofanira kufunga nyika uye pamusoro wake mugumo kukanganwa.
Sezvo akanga asati?
Kutaura zvazviri, neurongwa iyo Prime Minister anofanira yakatarwa zvino, kwagara pamusoro chete, zvisinei, pane nuances. Saka, asati kuitwa azvino shanduro Constitution, kana paramende akaramba kubvumirana pane mukuru mukuru, musoro wehurumende wokutanga kugadza bedzi nokuita. Aigona kuzodzosera kutanga kugadzwa Prime Minister (akashevedza neDare Vashumiri) muna mitatu. The namano pano ndiyo mbiri pfungwa. Chokutanga, varikutonga rakashanda, zvisinei kuvapo nokubvumirana pakati eHurumende. Chechipiri, pakanga pasina urongwa hwokuti rokumanikidzirwa pokufa mumiriri muviri. Zvaidavirwa kuti vaviri nuances aya undemocratic, nokuti vanogona kupa mamwe masimba enyika musoro nyika. Zvinonzi vaiona creators reMitemo idzva, kana ushandiswe nzira iyo Russian Prime Minister anofanira yakatarwa.
subtleties kuti kuvhota
Muna State Duma yakasarudza pedyo nyore ruzhinji. Russian Prime Minister akabvuma kuti kana nokuti akavhotera anopfuura 50% vevatariri. Nzira yaJehovha nhengo gwaro iri inoparadzirwa RF mutungamiri. Nenzira, chakavanzika nokuvhota. Ndizvo zvinofungwa nomumwe Mutevedzeri haina zvakazarurirwa nzanga haina mumashoko nhamba.
Kudomwa Prime Minister anoita purezidhendi kwakavakirwa maonero vevatariri. Kuitira kudzivisa chero nokusagadzikana ari muvanhu, muna 1993 kuvhota nzira kwakavandudzika zvishoma. Ndiwo anonzi nyoro zvaunoda kuvhota. The nzira siyanei kubva munhu wakaiswa muBumbiro reMitemo, asi haambozvipikisi nayo. The musoro wehurumende kunoburitsa dzimwe nhengo dzeParamende kuti vaongorore musarudzo wandei. Aongorora zvinofungwa wevatariri, kuti sarudzo inofanira kuitwa chimwe chete kukwikwidza ne chemhando Rating. Tsamba mutemo vakacherechedza. Asi pamberi pamutemo kutsunga aikwikwidza rakaita ongororo kuti anobvumira elites vasvike nekubvirana pasina zvinonyadzisa munzanga. Sachigaro Russian Hurumende muenzaniso uyu chinotsigirwa wevatariri, iyo inoita kuti kushanda zvinobudirira zvikuru. Uye ichi ndicho zvikuru yose nyika uye vanhu kugara mairi.
Masimba Prime Minister
Vanhu vasina vasangana hurumende mitumbi mabasa sokuti namano haisi chakakomba inorondedzerwa pamusoro. Zvisinei, hazvisi. The mukuru mukuru Russian Federation - enyika nhamba. munhu uyu unochinja kukura yose, kubva chisarudzo chake kunoenderana nezvenzvimbo kwouwandu hwevanhu kana kuderera hwenyika uye dzimwe nyaya dzinokosha. Mukuwedzera, dzinozivikanwa musoro nevarikutonga bazi vari kutema vanhu nemavhinga zvose. DA Medvedev, sachigaro Government Russian, Chokwadi, matambudziko zviduku zvisina zvinobatanidzwa. Kuti aite izvi, pane nevakuru vakuru vomunharaunda. The Prime Minister anoronga basa miviri mamiriro. Ichi chinangwa chake chikuru. Ndiye anokonzera zvayo utariri kwemiviri ose Executive simba, akasikwa kuti kukura nyika, kunze specialized. The pamazita mabasa ake haruzvitsvakiri zvinoorora kana ukatarira mukuru shanduro. Zvakakosha kuti kuteerera pfungwa, achiti muna Prime Minister kuitei mubasa tsanangudzo uye Implementation kwezvirongwa negwaro. Mutsara uyu rinotsanangura basa rakaoma ezviuru zvevanhu ari sangano munyika. Maererano nenhamba, vanopfuura mamiriyoni 146 vanhu vanogara Russian Federation. Munhu wose ane dzavo zvavanoda. Vamwe zvinoda basa, uye zvimwe wechitatu magariro - kukura zvigadzirwa, tsika, dzidzo, utano uye zvichingodaro. nyaya dzose idzi zvagadziriswa nehurumende. Uye sachigaro waro anokonzera mushandi mumwe yeUnited paruzhinji uye mabasa ake. The Prime Minister achaita mushumo pamusoro basa pamberi mutungamiri Russian uye vamiririri nevanhu akasarudzwa, akatuma kunyunyuta uye chikumbiro vanhu. Ndiye musimboti wezvose mashandiro kuti Executive simba.
Kugadzwa Prime Minister - chinhu zvematongerwe. Munhu akabata chinzvimbo ichi vanofanira kusangana yakakwirira zvinodiwa nguva. Mamiriro panyika ari kuchinja nokukurumidza, uye izvi zvinofanira kufungwa nezvazvo kukudziridza nyika. Mukuwedzera, kubhabhatidzwa vanofanira kuchengeta vechikamu zvose mune zvematongerwe nokuda kuti chinangwa muitiro wacho saka zvachose chinyatsotsanangurwa muBumbiro reMitemo. nhambwe dzake chinangwa kuva nokubvumirana mhinduro zvinogamuchirika munzanga.
Nokutumwa of yakatarwa midziyo
How kuti rezinesi rokutyaira
Muripo mwana wechitatu: saizi, kunyoresa deadlines, zvinyorwa
The kugadzira Nguva Finnish vhiza muSt Petersburg, Moscow, Vladivostok. Magadzirirwo Finnish vhiza
The nguvo maoko of Qatar. Description uye kukosha pamutemo zviratidzo
"Utsotsi uye Kurangwa": matambudziko. Dzetsika mune Fyodor Dostoyevsky kuti yokufungidzira
Microstroke. Zviratidzo uye kurapwa nzira
Integrated basa iri gotwe rechipiri boka iri masvomhu, kutaura kukura
Cutlets kubva kuSalmon
Zvinoreva "Trind" yezvipikiri: kubatsirwa kana kukuvadza?
Trout Amber: Recipes, mafuta. How kubika Rainbow zvinonaka uye nokukurumidza?
Cultural centre "Pokrovsky Gates" muMoscow, kero, billboard
Shrine kweGomo Kykkos wemamongi sezvo shongwe Mutsika Orthodox
Kanyuk (shiri): tsanangudzo, mifananidzo. Chii chinodyiwa mutsva?
Plasma kana LCD zviri nani?
Upfu "Max Factor". Reviews kuchakubatsira kusarudza
Makhanduru ane methyluracil yehemorrhoids: mirayiridzo yekushandiswa, zvakafanana, kuongorora